Rosia: Olombelona Koa i Kadyrov · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2018 6:27 GMT
Timur Aliev ( timur_aliev mpampiasa LJ ), lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny gazety Chechen Society mpiseho isan-kerinandro (printy sy aterineto), no nandinika (Rosiana) ny tsy maintsy tsapa rehefa hoe matanjaka toa an'i Kadyrov, ao anaty firenena iray feno olona sahirana. Ao anatin'io fampidirana io ihany, zarain’ i timur_aliev ihany koa ireo fomba fijeriny ny toerana misy ny asa fanaovana gazety ao Tsetsenia.
Nandany tapak'andro aho androany tao amin'ny Efitrano Malalaka Ramzan tao Gudernes, nandritra ny fanolorana ireo loka ho an'ireo mpanao gazety nandefa ny tantarany tany amin'ny fifaninanana Golden Pen. Ny [Akhmad Kadyrov] Fund no nikarakara ny hetsika.
hippy55: Raha toa misy mpitandro filaminana iray, tsy mpitandro filaminana tsetsenina fotsiny, mandrakitra ho anaty lahatsary izay asa ataony, hanao sonia ny didm-pitsaràna hamonoana azy izy izay. Na ho very asa, farafahakeliny.
timur_aliev: Nahazo fiara io mpitandro filaminana io hanaovany ny asany…
timur_aliev: Olombelona koa i Kadyrov…
jan_voskresensk: Angamba tsy ampy fandanjalanjàna ny fanontaniako ary mety tena tsy ananakop ny zo hametraka ilay izy… saingy – ahoana no fihetsikao manokana manoloana an'i Ramzan Kadyrov? Monina any Okraina aho, liana amin'ny tantaran'i Ichkeria ary tsy dia nanan fijery manokana loatra mikasika io olona io izaho sy ireo namako, izay mifampizara fahalinana sy fialamboly. Noho izany mahaliana ny mihaino olona miatrika ireny olana ireny sy [iharan’] ireo fanapahan-kevitra nataon'i Ramzan.
timur_aliev: Sarotra ny mamaly tsy mianbakavàka- Izaho dia mpanohitra azy, ary angamba izay tokoa, saingy tsy azoko atao tsinontsinona ireo zavatra tontosany…
jan_voskresensk: Ary inona no hiseho amin'ny 5 Oktobra? Tsy manan-kolazaina aho
timur_aliev: feno 30 taona i Ramzan